Booliska Soomaaliya oo soo bandhigay Madbacado si sharci darro ah daabacaad u sameeyay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Booliska Soomaaliya oo soo bandhigay Madbacado si sharci darro ah daabacaad u sameeyay
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo maanta la hadlay Warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ay sameeyeen howlgal ay kusoo qabteen madbacado si sharci daro ah u daabacayay buugaagta manhanjka waxbarashada dalka ee dhawaan dowladda ay soo saartay iyo dadkii lahaa.
Waxa ay sheegeen in daabacista buugaagta manhajka qaranka lasiiyay hal madbacad oo tartan lagaliyay kusoo guuleysatay ayna qalad tahay in ay badiyaan madbacado aan ogoloshaasho ka ahaysan dowladda.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federalka Soomaaliya Feysal Cumar Guuleed ayaa waxa uu sheegay in hal madbacad ay siiyeen ogolashada daabacaada buugaagta lana ogoleen in labadiyo laguna soo daro kuwo kale.
Waxa uu Shacabka Soomaaliyeed uga digay in ay iibsadaan buugaagta l abadiyay ee aan ahayn kuwa ay daabacday madbacadda ruqsada uheysata daabacaada cidii lagu arko, iyadoo iibinaysa ama haysatana sharciga la horgeyn dooono.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed dhame Sadiiq Aadan Cali ayaa waxa uu sheegay in howlgal ay sameeyeen ay kusoo qabteen madbacadaha sida sharci darada ah u daabacayay buugaagta manhanjka waxbarashada dalka , dadkii lahaa iyo kuwii ka shaqaynayay sharcigana lahorgayn doono.
Booliska Soomaaliya oo soo bandhigay Madbacado si sharci darro ah daabacaad u sameeyay was last modified: June 23rd, 2020 by Admin
AKHRISO:-Taliyeyaasha Ciidamada xoogga dalka, Booliska iyo Nabadsugida oo xilalka laga qaaday
Akhriso:-Aqalka Sare oo maanta ka doodaya Xeerkii dalka looga mamnuucay Shirkadda DP World.